Inzima impilo kumndeni waseMbali 18 | News24
Inzima impilo kumndeni waseMbali 18
ISITHOMBE:NOMPENDULO NGUBANE UNksz Thoko Bhengu emi ngaphandle komuzi wakhe lo athi awukho esimeni esihle ukuthi ungahlala umndeni.
SEKUYINTO ejwayelekile ukuthi amalunga omndeni wakwaBhengu ayisithupha (6) alale engadlile uma kungazange kube khona uMsamariya olungile olule isandla.
Lo mndeni waseMbali Unit 18 okubalwa nabantwana abane abayizintandane uthi uthwale kanzima kusukela ngesikhathi kulimala uNksz Thoko Bhengu ongumama wekhaya.
UBhengu (50) wawa walimala iqakala ngonyaka odlule lokho okwenza ukuthi angabe esakwazi ukuthi asebenze ukuze azokwazi ukondla umndeni wakhe.
Uthe emva kokulimala kwatholakala ukuthi unesifo sofuba (TB) esesimkhinyabeze unyawo. Kumanje uhamba ngohlaka lokuhamba (walking frame) ngenxa yokulimala.
“Ngihlala nabantwana abashonelwa abazali. Ngihlala nendodana yami nayo okwaphoqeleka ukuthi iyeke isikole ukuze izokwazi ukungibheka ngesikhathi ngilimele ngingakwazi ukuhamba. Waphuma enza ibanga lesishagalombili, kwadingeka ukuthi azongigada ngoba akekho omunye owoyezokwazi ukungigada. Indodakazi lena ezalwa udadewethu ongasekho nayo ikhona ihlala nathi lapha ekhaya nabantwana bayo. Lokho kwenza ukuthi sibe baningi futhi kube nzima nesimo sempilo. Uma singazange sisizwe amalungu esonto ngokudla, siye singazi ukuthi sizokwenzenjani ngoba kuba nzima impela.
“Sekuze kwayinto ejwayelekayo ukuthi siyalala ngaphandle kokudla ngezikhathi ezinzima,” kusho uBhengu.
Uqhube wathi okunye okuye kubasize kuba imali yesibonelelo sikahulumeni yabantwana ababili okungabazukulu bakhe.
“Kunabazukulu ababili obazalwa ile ndodakazi kadadewethu okuyibo nabo ababuye basize ekutheni sikwazi ukuthenga impuphu sikwazi ukuthi silale sidlile kwezinye izinsuku. Okwenzekayo ukuthi ngesikhathi ngisesibhedlela e-Edendale kwangena abantu bagqekeza lapha endlini bathatha yonke into yami kanye ne-ID. Ukuthathwa kwe-ID kwenze kwaba yinkinga ukuthi ngibhalise imali yesibonelelo. Kukona konke okwenzekayo esikufisayo ukuthola indawo engcono yokufihla ikhanda.
“Indlu esihlala kuyona inamagumbi amane kodwa ayikho esimeni esigculisayo. Ebusika kungena makhaza kanti ehlobo iyavuza uma imvula ina kungena amanzi endlini kanti lokho kuyisimo esibi kakhulu ikakhulukazi kubantwana,” kuqhuba uBhengu